Maitiro ekuburitsa nzvimbo pane chako chishandiso neApple Music | IPhone nhau
Maitiro Ekudzima Mimhanzi kubva kuApple Music pane Yako Dhizaina Kusunungura Nzvimbo
Zvinogona kuitika kune vazhinji venyu, seni, kuti isu tinogara tine yambiro inoshungurudza ye «Kuchengetedza kwave kuzere»Pane edu zvishandiso, chimwe chinhu chinogumbura, sezvo ini ndisisina mafoto ekudzima kana maapplication ekudzima… Asi tinogona kusunungura nzvimbo kana tikabvisa nziyo dzakachengetwa pane yedu Apple Music chishandiso.
Maitiro acho akafanana neako iPad kana yako iPhone uye tinogona kudzima dzese kana dzimwe nziyo, ini ndinojekesa izvi, ngatitange!
1 Maitiro ekudzima ese akachengetwa mimhanzi.
2 Maitiro ekudzima nziyo kubva kune akasarudzika muimbi.
Maitiro ekudzima ese akachengetwa mimhanzi.
Kutanga enda ku Zvirongwa.
Press on General > Shandisa (iOS 8 kana pakutanga) Kuchengetedza uye iCloud (iOS 9)> Manage chengetedzo.
Zvese zvinoshandiswa zvinoremerwa, ikozvino pfuurira mberi mumhanzi.
Mukona yepamusoro yekurudyi pane bhatani rinoti Hora, chengetedza pasina kutya.
Dzvanya pa «Nziyo dzese» uye bhatani dzvuku richaonekwa. Bvisa, Dhinda uye voila, iwe wakasunungura nzvimbo pane yako iPad kana iPhone.
Maitiro ekudzima nziyo kubva kune akasarudzika muimbi.
Zvese zvinoshandiswa zvinoremerwa, pfuurira mberi mumhanzi. Iye zvino tine sarudzo mbiri dzekudzima mimhanzi, ye nziyo dzevaimbi kana the azere muimbi.
Dzvanya pane iyo munyori kuvhura nziyo dzeichi.
Nziyo dzese dzenyanzvi dzinozoratidzwa, zvino tinya pane bhatani Hora uye bvisa nziyo dzaunoda.
Iye zvino Dhinda Hora pamusoro pechidzitiro.
Dzvanya pamuenzi, bhatani dzvuku richaonekwa. BvisaKuomerera pairi kuchabvisa dzese nziyo dzemuimbi akasarudzwa.
Ndinovimba mutungamiriri uyu anokubatsira iwe kuti uwedzere iyo yemahara nzvimbo pane ako zvishandiso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Maitiro Ekudzima Mimhanzi kubva kuApple Music pane Yako Dhizaina Kusunungura Nzvimbo
Activator yakagadziridzwa uye ikozvino inoenderana neIOS 9
Tweaks inoenderana neIOS 9 (III)